Manchester City oo diiradda saareysa saixiixa labo xiddig oo ka ciyaara Premier League si ay baddel ugu noqdaan Fernandinho - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Manchester City oo diiradda saareysa saixiixa labo xiddig oo ka ciyaara Premier League si ay baddel ugu noqdaan Fernandinho
September 13, 2021 at 10:11 Manchester City oo diiradda saareysa saixiixa labo xiddig oo ka ciyaara Premier League si ay baddel ugu noqdaan Fernandinho2021-09-13T10:11:15+02:00 CAYAARAHA
(Manchester) 13 Sebt 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa baadi goob ugu jirta baddelka xiddiga khadka dhexe ka ciyaara ee Fernandinho kaasoo ku jira xilli ciyaareedkii ugu dambeeyay ee qandaraaskiisa garoonka Etihad.
Kubbad burburiyaha reer Brazil ayaa bilaash kaga tagi kara City dhammaadka xilli ciyaareedkan, waxaana haatan kooxdiisu ay isha la raaceysaa xiddiga West Ham United u ciyaara ee Declan Rice sida laga soo xigtay The Sun.
Warar kale ayaa sheegaya inuu Macallin Pep Guardiola maamulka kooxdiisa ka dalbaday inay lasoo saxiixdaan laacibka Leeds United ee Kalvin Philips.
Si kastaba ha ahaatee, Man City ayaa loollan ku aaddan saxiixa Rice kala kulmeysa kooxda Manchester United oo ay si gaar ah u xafiiltamaan, taasoo dooneysa inay kubbad raacahan kusoo safkooda khadka dhexe.
Labada xiddig ee bartilmaameedka u ah Citizens ayaa door muuqda ka qaatay in xulka qaranka England uu gaaro fiinaalkii tartanka qarammada Yurub ee EURO 2020 inkastoo xulka Taliyaaniga uu koobka ka qaaday Saddexda Libaax.
« Taliban oo Amarro Dul-dhigtay Jaamacadaha Afghanistan
Majaajiliistaha caanka ah ee Basadiir oo maanta lagu soo dhoweeyey MUQDISHO »